Moments Neshamwari 60
Chii chinonzi Memory?
Memory ndiko kuburitswa kwezvinoratidzwa nehunhu, hunhu, kana hunyanzvi hwakaumbwa mune izvo pamusoro pezvakagadzirwa. Memory haina kuburitsa chinyorwa kana chinhu kana chiitiko. Memory inoberekera izvo zvaive zvakagadzirwa nenyaya kana chinhu kana chiitiko. Maitiro ese anodikanwa pakuberekeswa kwemafungiro akaverengerwa mune yechirangaridzo.
Kune marudzi mana endangariro: ndangariro ndangariro, ndangariro ndangariro, cosmic ndangariro, husina mugumo ndangariro. Yemhedziso ndangariro ndeye kuziva zvese zviitiko uye zvinoitika mukati mekusingaperi uye nguva. Kurangarira kweCosmic ndiko kudzoreredza kwezviitiko zvese zvepadenga mukusingaperi kwayo. Ndangariro dzendangariro ndiko kubereka kana kuongorora pamwe nepfungwa shanduko dzakachinjika kupfuura kwayakabva. Iko hakuna mukana unoshanda unotorwa kubva mukubvunza muchimiro chekusingaperi uye cosmic mind memory. Ivo vanotaurwa pano nekuda kwekuzara. Sense memory ndiko kubereka nemanzwiro ekufungidzira akaitwa pavari.
Ndangariro iyo inoshandiswa nemurume ndangariro yekufunga. Haana kudzidza kushandisa uye haazive nezvezvimwe zvitatu-ndangariro ndangariro, kugona kwepamoyo uye ndangariro dzisingaperi-nekuti pfungwa dzake dzakadzidziswa kuti dzishandise pfungwa dzekurangarira chete. Sense memory inoitwa nemhuka nezvirimwa pamwe nemaminerari. Sekufananidzwa nemurume, huwandu hwepfungwa dzinoshanda kuburitsa ndangariro dzinoderera mumhuka uye chirimwa nemaminerari. Ndangariro yemunhu inogona kunzi hunhu hwekuyeuka. Pane mirairo minomwe yendangariro inoita ndau izere yehunhu ndangariro. Kune manomwe manzwi muhunhu hwakazara hwemunhu. Idzi ndangariro nomwe dzekurangarira kana kuraira ndangariro dzehunhu ndidzo: ndangariro dzinoona, ndangariro dzinonzwika, ndangariro yekuravira, kurwaridza ndangariro, kubata ndangariro, tsika yechirangaridzo, “ini” kana ndangariro yokuzivikanwa. Idzi pfungwa nomwe dzinoumba rudzi rwekuyeuka hune munhu mumamiriro azvino. Naizvozvo kurangarira kwehunhu kunogumira kunguva iyo iye iye anoyeuka anozvizarurira iye ega kutanga kwake mafungiro epasirese, kune kubereka kwemafungiro akaitwa munguva dzino dzakatangira nguva iripo. Maitiro ekunyoresa zviono uye kudzoreredza zvimiro zvakanyoreswa kuburikidza nekuona, kurira, kuravira, kunhuwira, kubata, tsika uye "ini" manzwi, uye maitiro akaomarara uye kuwedzeredza kweizvi kuratidza basa rakadzama rinodiwa kune "ndangariro , ”Yaigona kureba uye inonetesa. Asi ongororo inogona kutorwa inogona kuve inonakidza uye ichipa nzwisiso yehunhu hunhu.
Unyanzvi hwekutora mifananidzo hunoratidza kurangarira kwekuona-kuti zvinoratidzwa kubva kuzvinhu zvinogamuchirwa sei uye zvinonyorwa sei uye zvinoratidzwa zvinobva zvabuditswa sei kubva zvakarekodhi. Chidhori chinotepfenyika chishandiso chekushandisa kwepfungwa yekuona uye chiito chekuona. Kuona ndiko kushanda kwegadziriro yeziso uye nekubatana kwayo, yekukodha uye kubereka kuratidzika kwakaratidzwa uye kwakaitwa nechiedza. Mukupenda chinhu, lens yakafukurwa, uye yakatarira kuchinhu, iko kusanganisa kwedhiasragm kwakaiswa pakubvumidzwa kweiyo chiyero chakakodzera chechiedza, chinotariswa nehuremu hwe lens kubva pachinhu kuti chichitorwa mafoto; chiyero chenguva yekuratidzwa-kweiyo firimu yakanzwika kana sahani yakagadzirira kugamuchira fananidzo yechinhu chisati chaiswa-inopiwa, uye fungidziro, iyo pikicha, inotorwa. Kuvhura maziso eziso kunovhura ziso reziso; iyo iris, kana diaphragm yeziso, inozvishongedza iyo pachayo kukukosha kana kusavapo kwechiedza; iyo iyo ziso rinowedzera kana zvibvumirano kutarisa mutsara wekuona kwechinhu chiri pedyo kana chiri kure; uye chinhu chinoonekwa, iyo pikicha inotorwa nepfungwa yekuona, nepo kutarisa kwacho kuchinge kwakabatwa.
Maitiro ekuona uye kutora mifananidzo akafanana. Kana chinhu chacho chichifamba kana kuti lens kana ichifamba, kana iye akatarira, panenge paine mufananidzo wakasarudzika. Pfungwa yekuona haisi imwe yemashini ekugadzira ziso. Pfungwa yekuona chinhu chakasarudzika, iko kusiyaniswa nekungochinjika kweziso sezvo ndiro kana firimu iri kure nekamera. Iko kufunga uku kwekuona, kwakasiyana kubva kunyangwe kwakabatana nemashandisirwo eziso, iro rinorekodha zviono kana mifananidzo yezvinhu zvakagamuchirwa nemuchina wekushandisa weziso.
Kuona ndiko kutora zvinyorwa izvo zvinogona kudzoreredzwa nekuona kwekuona. Sight memory inosanganisira kukanda kana kudhinda pamusoro pechiono chekuona iyo pikicha kana fungidziro yaive yakanyorwa uye yakarongedzwa nepfungwa yekuona panguva yekuona chinhu chichiwedzeredzwa. Kuita uku kwekuyeuka kwekuenzanisira kunoenzanisirwa nekudhinda kwemifananidzo kubva mufirimu kana ndiro mushure mekunge yagadziriswa. Imwe neimwe nguva kana munhu kana chinhu zvachirangarirwa chinyorwa chitsva chakagadzirwa, saka kutaura. Kana munhu asina kujekesa mifananidzo yakajeka ndeyekuti muna iye uyo ari kuona, pfungwa yekuona, haina kuvakwa uye haina kudzidza. Kana pfungwa yekuona kwemunhu ikakwidziridzwa uye ikadzidziswa, inogona kubereka chero chiitiko kana chinhu chakafadzwa nekujeka uye chokwadi chaivapo panguva yacho.
Photographic prints kunyange, kana ikatorwa nemuvara, inogona kunge isiri yemakopi kana mifananidzo yekuona yekuyeuka kana yakanyatsodzidziswa. Kuedza kushoma kunogona kugonesa imwe yemikana yekuyeuka kwake kwekuona kana yeimwe pfungwa dzekurangarira dzinoumba ndangariro yake yeunhu.
Rega munhu avhure maziso ake uye atendeusire kumadziro kana patafura pane zvinhu zvakawanda. Zvino ngaasvinudze meso ake kuti awane chidimbu chechipiri uye avavhara, iye panguva iyoyo akaedza kuona zvinhu zvese zvakatenderwa nemeso ake. Kuwanda kwezvinhu zvaanoona uye kusarudzika kwaanozviona zvichashanda kuratidza kuti kusasimudzirwa kwake ndangariro yake yekuona. A maitiro mashoma anoratidza kuti zvinoita sei kuti iye akudziridze kuyeuka kwake kwekuona. Anogona kupa nguva yakareba kana kupfupikisa kuratidzwa, kuti aone chaanogona kuona. Paanokwevera machira pamusoro pemaziso ake zvimwe zvezvinhu izvo zvaakaona nemaziso ake akavhurika zvinobva zvanyatsoonekwa nemeso ake akavharwa. Asi zvinhu izvi zvinodzikira uye pakupedzisira zvobva zvanyangarika uye ipapo haachaona izvo zvinhu uye zvakangosara aine fungidziro mupfungwa dzake yezvaakanga aona nemurangariro wekuona kwake. Kupera kunobuda pamufananidzo kuri kukonzerwa nekusakwanisa kwekuno kuona kwekubata kubata kwechinhu chakaitwa nechinhu. Nekudzidzira kwekuona kana kuyeuka kwemifananidzo kudzoreredza zvinhu zviripo nemeso zvakavharwa kana kubereka zvekare zviono kana vanhu, ndangariro yemifananidzo inovandudzwa, uye inogona kusimbiswa nekudzidziswa kuti ibudise manhanga anotyisa.
Iyi ipfupiso yekurangarira kwekuona ichashanda kuratidza izvo dzimwe pfungwa dzekurangarira ndedzipi uye kushanda kwavo. Sezvo kutora mifananidzo kunoratidza kurangarira kwekuona, giramufomu inofananidza nekurekodhwa kwemanzwi uye kubereka zvakarekodhi marekodhi senge ndangariro dzinonzwika. Iko kurira kweinzwi kwakasarudzika kubva kumagetsi ekutsikisa uye chishandiso chezeve sezvo pfungwa yekuona iri musiyano kubva kune optic nerve uye zvishandiso zvemeso.
Meshika contrivances inogona kugadzirwa kutevedzera pfungwa yekuravira uye yekunhuhwirira uye kubata kweiyo kamera uye giramufomu ndezvekuenzanisa, kunyangwe makopi asina kunaka uye makopi asingazive-yemitezo yemunhu yakabatana nekuona uye manzwi anonzwika.
Ndangariro yehunhu hwekuzvibata uye iyo "ini" yekuyeuka pfungwa ndidzo mbiri dzakasiyana dzemunhu, uye zvakakonzerwa uye yakaitwa nekuvapo kweiyo pfungwa isingaperi iyo inoshandisa hunhu. Nechemumoyo wehunhu hunhu hunodzidza mitemo yehupenyu hwayo, uye kubereka izvi sechipfungwa chetsika pane mubvunzo wechakanaka nechakaipa une chekuita. Iyo "I" pfungwa yekuyeuka inoita kuti hunhu uzvizivise pachavo maererano nechero chiitiko mumamiriro ezvinhu kana chinomiririra mariri chakagara. Parizvino pfungwa dzakapinda mumuviri hadzina kuyeuka kupfuura hunhu, uye ndangariro dzadzinogona kuita ndidzo chete dzakatumidzwa zita uye dzinoumba hunhu huzere, izvo zvinogumira pane izvo zvinogona kuonekwa, kana kunzwiwa, kana akanyemwerera, kana kuravira, kana kubata, uye izvo zvinonzwa zvakanaka kana zvisirizvo sekuzvibata pachako sehupenyu hwakaparadzana.
In the December Izwi ichapindurwa mubvunzo, "Chii chinokonzeresa kurangarira," uye "Chii chinoita kuti munhu akanganwe zita rake kana kwaanogara, asi ndangariro yake ingangokanganisika mune zvimwe zvinhu."